35 boqolkiiba dadka kenyanka oo doonayo in Raila uu ka faristo siyaasada – The Voice of Northeastern Kenya
35 boqolkiiba dadka kenyanka oo doonayo in Raila uu ka faristo siyaasada
Ra’iyi aruurin la qaaday ayaa lagu sheegay in 35 boqolkiiba dadka kenynka ay doonayaa in Ra’iisul wasaarihii hore ee dalka in uu ka fariisto guud ahaan siyaasada.
Ra’iyi aruurintan ay sameysay shirkada IPSOS oo ay ka aruurisay dad tiradooda gaaareyso 2,067 ayaa lagu sheegay in 34 boqolkiiba ay doonayaan in raila uu ku soo nagaado siyaasada balse uusan u tartamin jagada madaxtinimada halka 26 boqolkiiba ay rabaan in uu hogamaiyo xisbigiisa ODM balse uusan u tarmin xilka ugu sareeyso ee dalka.
Sida lagu sheegay warbixintan oo laqaaday intii u dhaxeysay 4-tii bishii July ilaa 18-kii isla bishaasi ayaa lagu xusay in dhamaan dadkii soo jeediyay in raila oo ka farisot siyaasada ay ahaayen taageerayasha Jubille halka 5 boqolkiiba ay ahaayen taageerayaasha isbaysiga Cord.
Sanadkii 2013-kii ayaa ra’iyi aruurin sidan oo kale ay qaaday IPOS lagu sheegay in 36 boqolkiiba dadka keynaka ay doonayaan in Ra’iisul waasaarihii hore ee dalka uu ka faristo siyaasada taso hadda 1 boqwlkiiba hoos oga dhacday.
Warbixintaasi kadib ayaa waxaa soo baxay fikrado kaladuban oo laga bixinayo arintaasi iyadoo taagewrayaasha Cord gaar ahaan Mr Odinga ay warbixintaasi kugacan seyreen.
← 14 ruux oo u dhashay shiinaha oo lagu weeraray Countiga Narok
Everton oo la soo wareegtay Idris Gueye →